ओक्टाभियो पाज -
माया नम्बर ६५३
शंकर लामिछाने -
उसले बताई कि कसरी पुस्तकालयमा उसले उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीका पुस्तकहरु पाएकी र पढेकी छ, त्यस बखतका नारी पुरुष पर्दा गर्थे, उनीहरू विवाह गरी घरजम गर्थे। उसले भनी कि पर्दा, विवाह र घर शब्दका अर्थ बुझ्न उसलाई कति मेहनत गर्नुपरेको थियो। ती तीनवटै शब्दका अर्थ पनि उसले मायालाई बताई। उसले भनी कि त्यस बखत पुरुषको जिम्मा आर्थिक बोझ र स्त्रीको जिम्मा गृहस्थी थियो। ‘थाहा छ माया, तिमीलाई कि तिनताक स्त्रीले पेटमा बच्चा हुर्काउँथे र आफ्नै घरमा जन्माउँथे।’ मायालाई उसको अगाडि कसैले स्वर्गको कुनै देवदेवीको जीवनचर्या वर्णन गरेजस्तो लाग्यो।
डोनाल्ड ट्रम्पको जय होस्
माधव दाहाल -
यसरी पल्लाघर बा आफ्ना व्यथा एकपछि अर्को गरेर मलाई सुनाउँदै थिए र भन्दै थिए, ‘मेरा हातखुट्टा चल्न छाडे। बाबु, आफैं खाना बनाएर खान सक्तिनँ। त्यो मोरो गधालाई मैले सयौंचोटि भनिसकें, बितेको कुरा गरेर केही फाइदा छैन हेर अब चाँहि आइज बाबु, आफ्नै मुलुक आइज भन्दा सुनेको नसुन्यै गर्यो।’
आऊ स्टेटस अपडेट गरम्
पूर्खाका वीरताका बयान गर्दै
गफ, हल्लाका घर बनाउँदै
संस्कृति र सम्पदाका ज्ञाता, प्रणेता सरी
चिरा परेका, टेकोमा अडिएका गौरवका बीचमा
दुई लाइन विचारणीय कुरो पोखम्
विदेश पुगेका छोराहरू किन फर्किन्थे
-धर्म सापकोटा राजु -
"छोराहरु किन हामीसँग बस्न आउदैनन्? किन फर्कन मान्दैनन बिदेशबाट? के बिदेश भनेको खोलाको पानी हो र? एकचोटी बगेपछी फर्कनै नसक्ने ? " गोबिन्दबा बुढीलाई सोध्छन्। बुढी केही बोल्दीनन्। डाक्टरले उनलाई हिंड्नुपर्छ भनेको छ। घरबाहिर हिंड्दा चिसो लाग्छ,तेसैले गोबिन्दबा हरेक दिन तीन चारपटक घरको भुईतलाबाट हिंडेर माथि तला पुग्छन र बैठकमा आउँछन । उनको तीनतले घरका बाह्र कोठा मध्ये ११ कोठा खाली छन्। कोठा जस्तै खाली छ उनको मन पनि। सॉंच्चै भन्ने हो भने आजभोलि गोबिन्द बाको आंखामा कुनै सपना उम्रेको छैन।ऑंसु उम्रेको छ।
स्वाधिन छन् किरात महिला
भूपाल राई -
किराती सौन्दर्यको सन्दर्भ आउँदा अथवा किराती नारीहरुको रुप विन्याशको बयान गर्दा अक्सर झन्डै तीन दशक अगाडिको गोपाल योञ्जनको एउटा गीत सम्झना हुने गर्छ। उनले त्यस गीतमा नारी सौन्दर्यको बारेमा आँखाको बयान गर्दा 'बदामी आँखा' भनेर बयान गरेका छन्। कुनै पनि नारीको आँखाको बयान गर्दा 'बदामी' भन्ने सौन्दर्यवाची शब्द प्रयोग भएको र मैले सुनेको सायद त्यो पहिलो शब्द थियो।
श्याम साह -
राति उसले सपनामा लाटीलाई नै देख्यो। सुरुमा त उसले बलात्कार गरेको तीन वटी केटीलाई देख्यो। त्यसपछि उसले आफ्नी स्वास्नीलाई जबर्जस्ती गरेको सपना देख्यो। तर, जब सबै उत्तेजित अवस्थामा हुन्थे। सबै लाटीमा रूपान्तरित हुन्थे। सबै लाटी जसरी नै छटपटाउँथे। पीडामा लाटी जसरी नै चिच्याउँथे।
सुदर्शन, (अनुवादः दण्डपाणि जैसी) -
बाबा भारतीले आफू घोडाबाट उत्रिएर त्यस अपाङ्ग मानिसलाई घोडामा चढाए अनि आँफै लगाम समाएर विस्तारै विस्तारै हिड्न थाले। अचानक उनलाई एउटा झट्का जस्तो लाग्यो अनि हातबाट लगाम छुट्यो। जब उनले देखे कि त्यो अपाङ्ग मानिस घोडाको पीठमाथी तनक्क तन्केर बसेको छ अनि घोडालाई दौडाउँदै लिएर जाँदैछ, तब उनी आश्चर्यचकित भए। उनको मुखबाट भय, विस्मय अनि निराशा मिश्रीत चित्कार निस्क्यो। त्यो अपाङ्ग मानिस डाकू खडगसिँह थियो। बाबा भारती केही बेरसम्म चुप लागेर बसे अनि केही समयपछी पूरा बल लगाएर चिच्याउँदै भने, ‘एकछिन पख।‘
इन्द्र थेगिम -
भाइ त १,२,३ गन्दागन्दै ठहरै ढलिहाल्यो निन्द्राले। मैले भाइलाई सुक्कुलमै सुत्न दिएँ। अब मासुको झोल बुलुक बुलुक उम्लन थाल्यो। भाइलाई जोगाउन भनी सुक्कुललाई जोरले तानेर अलि पर सारें।
त्यो अद्भूत तिहार
'विक्रम' मेजर गर्ज्यो । विक्रमअगाडि बढेर उभियो। मेजर एकाएक त्यो केटीनेर पुगेर त्यसको हातमा पेस्तोल थमाइदियो र त्यसको हात उठाइदिएर विक्रमतिर निशाना साँधेर र कड्क्योः 'ट्रिगर दबा, अनि तँ बचिस्, नत्र आज म तँलाई गोली ठोक्छु, यी कायरहरुलाई पालेर केही फाइदा छैन।'
विपिन मर्म -
रामनन्दको आँखामा अचानक सरलाको दृश्य देखापर्‍यो। रामनन्दको मनमा अचानक सरलाको बोली गुन्जियो, ‘तपाईंका श्रीमतीहरू पनि तपाईंहरूको सही आचरणको कामना गर्दै रोइरहेका छन्।’
नाजिक अल मलाइका -
मलाइकाले लामो समय कुवेत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिन्‌। सन्‌ १९९० मा कुबेतमाथि भएको इराकको आक्रमणका कारण उनलाई कुबेत छोड्न वाध्य बनाइयो। उतिसारो चर्चामा रहने नचाहने मलाइकाले सन्‌ १९७४ पछिका पच्चीस वर्षको अवधिमा लेखिएका रचनाहरू सङ्ग्रहित गरेर सन्‌ १९९९ मा अर्को पुस्तक प्रकाशित गराइन्‌। खाडी युद्ध सकिएपछिदेखि नै मिस्रको राजधानी कायरोमा बस्दै आएकी मलाइका धेरै वर्षसम्म पार्किन्सन्स रोगबाट ग्रसित भएर २० जुन सन् २००७ मा कायरोमा नै दिवंगत भइन्‌।
चाँदनी चोक, अनि कटिङ चिया
निरु त्रिपाठी -
के दिल्लीमा सबै केटा मान्छे खराब हुन्छ त? के दिल्लीमा सबै केटा बलात्कारी हुन्छ त? दिल्लीमा के सबै केटा मान्छे केटी देख्नवित्तिक्कै घुरिहाल्छन् त? के दिल्लीमा राजीव जस्तो व्यक्तिहरू पनि बस्दैनन् र? केही व्यक्तिहरूको गल्ती र राक्षसीपनको मूल्याङ्कन राजीवजस्तो व्यक्तित्वमाथि गरिनु पनि सरासर गलत होइन र?
एकपछि अर्को- च्याट टक निकै तिखा थिए। दृश्य भयानक। मुटु नराम्ररी बाउँडियो। मष्तिस्क खलबल्यायो। हृदय छियाछिया भयो। ल्यापटप झ्याप्प बन्द गरी। अरू सबुत आवश्यकै रहेन। आवश्यकता थियो त केवल हिम्मत, सासह र धैर्यको। अहिले पनि ऊप्रतिको आस्था र विश्वास धरमराएको थिएन। लामो श्वास लिएर आँखा चिम्म गरी अनि पल्टी नजिकैको टु-पिस सोफामा।
लक्ष्मण अधिकारी -
यो साथ तिम्रो त्यो रात तिम्रो
नसाको प्याला त्यो हात तिम्रो
जलेर कलेजो अंगार जस्तै
मेटिदैन प्यास तिर्सना उस्तै।
नशालु आँखा विषालु बनाऊ
अंगालेर मलाई मदिरा पिलाऊ
भरिलो बैस सिंगारेर आऊ
एकै नजरमा बेहोसी बनाऊ।
आऊ बसेर यो रात रङ्ग्याऊँ
जलेको कलेजो खरानी बनाऊँ
मरेर हामी रुँदैनन् कोही
पुछेर आँशु पिउँदछन् त्यही।
बडाबाको सातो गयो
सर्पले आफैंलाई डस्न थालेपछि
हाम्रा बडाबाको सातो गयो
पोहोर साल त त्यसले माझाघरेलाई मात्र टोकेको थियो
यसपालि त झन् तल्लाघरेलाई पनि टोक्यो
अझ हुँदा हुँदा
आफैंले दुध पिलाएको धामनले
अहिले त आफैंतिर पो फँडा फिजाउन थाल्यो
बडाबाको सातो गयो।
मैले थाहा नपाएका मलाई मन पर्ने चिजहरू
नाजिम हिकमत (टर्की) -
अवधिमै सो वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनी लुदमिला युरसेन्कोसँग लिभ टुगेदरको सम्बन्धमा रहे। सन्‌ १९३५ मा हिकमतले पियारे अल्तिनोग्लीसँग विवाह गरे। सन्‌ १९५० मा जेलबाट छुटेपछि उनले पियारेसँग सम्बन्धविच्छेद गरे र मुनेभ्भेर एन्दाकसँग हिँडे। पचासको दशकको शुरूका वर्षदेखि उनी गालिना ग्रिगोर्‍येभ्ना कोलेसनिकोभासँग रहे। गालिनासँग अलग्गिएपछि हिकमतले आफूभन्दा तीस वर्ष कान्छी भेरा तुलयाकोभासँग विवाह गरे।
माया ठकुरी -
एकातिर मेरी जन्मदातृ आमाको यस्तो दयनीय अवस्था, अर्कातिर पत्नी र छोराछोरीको गनगन अनि दिनदिनको बढ्दो महँगीको कारणले घरको खस्किँदो आर्थिक अवस्था, यी यावत् कुराले गर्दा म आफू नै विक्षिप्तजस्तै भइसकेको छु।
अचेल आभाजस्ता महिलाहरूलाई धर्मकर्म, व्रत, पूजा, परिवारभन्दा बढी स्वतन्त्रता चाहिएको छ। जे मनमा आयो त्यो गर्न पाउनु पर्ने स्वतन्त्रता। मलाई लाग्यो- हो रैछ, कलियुग सबैतिर छाइसकेछ।
दिनेशकुमार कोइराला -
शरद सरलाई जवानी नआएको पनि होइन। पहिल्यै आयो, त्यत्तिकै गयो। त्यो पोस्टकार्ड साट्ने जमानाको जवानी असाध्यै असहज। प्रतिकूल समयमा जन्मिनु परेकोमा शरद सरको मन नराम्ररी पोल्छ अचेल। धेरै केटीले शरद सरको अटो भरे। सायरी पनि लेखे। तर उनको मन भरेनन्। प्रेम र प्रणयका एक शब्द पनि लेखेनन्।
एउटा क्रिसमस केक
अशोक सिलवाल -
पार्टीमा लुसीलाई क्रिसमस केकले असाध्यै प्रभावित गर्‍यो । ऊ त्यो केक कसले बनायो होला भन्नेमा मात्र ‘फोकस्ड’ भई । उसको सारा ध्यान यदि केहीमा थियो भने त्यही केकमा मात्र थियो। उसको उत्सुकतामा अधैर्य थपिएको थियो। अन्तिममा उसले पत्ता लगाई, त्यो सुन्दर क्रिसमस केक बनाउने अरु कोही नभएर रोब थियो। ऊ केकसँगै रोबप्रति पनि आर्कर्षित भई।
काठमाडौँ, असोज २९ -
शान्ति सेनाको योगदान झल्काउने ‘शान्ति सेना र विदेशी सेनाहरुमा नेपाली÷गोर्खाली’ नामक कृति बजारमा आएको छ ।
रत्न श्रेष्ठ पुरस्कार गुठी बाग्लुङले प्रकाशन गरेको सो पुसत्कका लेखक पूर्व राजदूत एवम् लेखक हिरण्यलाल श्रेष्ठ हुन् ।
पुसत्कमा छ अध्याय छ । परिशिष्टमा गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सम्झौता, १९४७ र परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन, २०५५ सम्बन्धी जानकारी समेत समावेश गरिएको छ ।
सर्वदा अधिकारी (स्टाफ नर्स, कान्तिबाल अस्पताल) -
अझ विजया दशमीको दिन आफन्तको घरघरमा टिका थाप्न जादाँ पाएको काटेको एक टुक्रा केरा र मेवाको स्वाद अझै मुखबाट हटेको छैन। घर आएर दक्षिणा पाएको थोरै भएपनि पैसा गन्दाको मज्जा र आनन्द अहिले मासिक तलब थाप्दा कदापी पाउन सकिदैँन। उसबेला टिका थापेर लिइने आशिर्वादको महत्व थाहा थिएन। आर्शिवाद भन्दा पनि नयाँ लुगा, टिकापछि पाईने दक्षिणा अनि विद्यालयले दिने छुट्टी बढी प्राथमिकतामा पर्थे।
सरगम भट्टराई -
सीमा आफ्नै सीमारेखाभित्र शरदप्रति समर्पित छे। मेसेन्जरमै कलकलाउँदो बैँस शरदसँग साटेरै पुगेको छ उसलाई। लोग्ने नभएकै आधारमा छड्के नजर हेर्नेहरुप्रति वाक्क भएरै कतिपय फोननहरु त उठाउँदिन अचेल सीमाले। उसको एउटै सुर्ता छ: प्राणप्रिय शरद र दुवैकी भर्खरै टुसाएकी कोपिला खुशी। त्यो मधुर मिलनको प्रतिक्षामा क्षितिज नियालिरहेकी छे सीमाले।
इन्द्र थेगीम -
दसैं किन आउँछ दु:खको घाउ बल्झाउन घरिघरी।
राती मस्त निन्द्रा मा पनि ऐठन मार्न आउँछ उस्तैगरी।
तिर्छु भन्दै ३ महिना भईसक्यो घरभाडा तिरौं के गरि?
बिहान् सांझ छाक टार्न जोइपोई खटिएकै छौं मरिमरी।
हैट, चंगा चैट !
सरला गौतम -
ऊ नबोलेको देखेपछि केटी झन छक्क पर्छे। मोटा लुगाले छोपिएर पो रैछ। नजिकबाट त केटी हिस्सी नै लाग्यो उसलाई। अनि उस्को छक्क परेको अनुहार छक्कमै पज गरिदियो सचिनले, जवाफ नदिएर। मालिकले रिल घुमायो केटीका अनुहारको। गजल फर्माएर। साला बतमिज तिखे ! भिलेन खेल्यो। सिल्पाभन्दा निकै सिनियर छ केटी। तर उस्लाई मनपर्यो। बरु त्यो तिखेसंग कुम नटाँसे हुने नी।
शुभकामना, मेरा प्रेमीहरु!
शिव प्रकाश - म एक पुरुष पुरुषहरुको पनि प्रेमी पुरुष ! सत्य हो, नारीभन्दा धेरै छन्, पुरुष मेरा प्रेमीहरु ! जीवनको डायरीमा मेरै दैनिकी लेख्छन् मनको नोटबुकभरी मेरै नाउँ कोर्छन् मस्तिष्कका कुनाकाप्चा मेरै तस्बिर भुण्ड्याउँछन् चिन्ताको सघन अँध्यारोमा पीडक...
चट्याङ मास्टर -
एउटा बोको नमार्दैमा जाओस इज्ज़त गयो भने!
कोठा नम्बर ११
फोनमा मस्किँदै बोलेकी म्यामले रिसले चुर भएर उसको फाइल समातेर भनिन्– राष्ट्र सेवक कर्मचारीसँग बोल्ने सोमत छैन भाइ? अलि बोल्न सिक । भाइ पनि के कम? भन्दिए– राष्ट्र सेवक भन्न लाज लाग्दैन? काम पनि राष्ट्र सेवकको जस्तो गर्नुपर्‍यो नि म्याम? सम्मान पाउन सेवा पनि दिन जान्नुपर्छ।
हत्तपत्त घडी हेर्दै आफू जसरी पनि जान पर्ने कुरो चमेलीलाई बताउँदै ढोकातिर हान्निए। चमेलीले बाटो छेक्दै भनिन्, ‘औ यता सुन्नुस् न! तपाईंले आज ठूलो धर्म गर्नुभयो। म आजदेखि तपाईंकी अर्धाङ्गिनी भएँ।’ बाहिर यमराज मुसुमुसु हाँसेर कुरिरहेका थिए। ‘लेट्स गो स्ट्रेट टु ह्याबेन्’ भनेको आवाज गुन्जिरह्यो।